Photoshop ho an'ny iPad dia havaozina tsikelikely araka ny Adobe | Vaovao IPhone
Photoshop ho an'ny iPad dia havaozina araka ny fandaharam-potoana mahery setra avy amin'ny Adobe
Tamin'ny faran'ny taona lasa dia nasehon'i Adobe anay izay Photoshop ho an'ny iPad. Napetrak'i Apple teo amin'ny lovia io. Misaotra ny iPad Pro vaovao, manana fitaovana mihoatra ny ampy hahafahana mampandeha rindranasa iray mitaky fampiasa amin'ny fitaovana toy ny Photoshop tsy misy olana.
Nandray ilay fonon-tànana i Adobe ary nanomboka niasa tamin'ny fampiharana iPad voalohany. Nantsoiny hoe kinova "tena izy" io, ary fanetsiketsehana be dia be no natsangana mba hahitana raha tena niaina ny iray tam-po aminy ireo Photoshop for iPad "amin'ny solosaina macOS sy Windows. Ny olana dia ny teny hoe "tena kinova" dia nifangaro tamin'ny "kinova feno".
Nandritra ny iray volana Adobe dia nizara kinova beta an'ny Photoshop ho an'ny iPad, eo amin'ny sasany amin'ireo mpanjifanao. Ny marina dia miasa tsara izy io, saingy tsy manana asa maro izy raha oharina amin'ireo kinova solosaina.
John Gruber an'ny Fireball: sahy, mino fa ity dia kinova feno, ary misy fiasa sasany tsy hita, hanampy azy ireo ny Adobe amin'ny ho avy. Gruber dia tsy mahita izany ho olana, fa toy ny politikan'ny orinasa. Manome toky fa tsy mamoaka kinova famaranana velively ny Adobe, fa manavao azy ireo hatrany amin'ny fampidirana fiasa vaovao.
Nasongadiny fa ny lesoka dia ny fanakorontanana ny foto-kevitry ny "tena izy" tahaka ny namaritan'i Adobe ny Photoshop ho an'ny iPad amin'ny "feno". Ny orinasa dia nanome an'io adjectif io, tsotra fotsiny satria efa nanao ezaka be izy ireo mba hampifanaraka ity kinova ity ho an'ny Apple miorina amin'ny kaody Photoshop amin'ny birao ihany. Tsy rindranasa vaovao ho an'ny iPadOS izay toa ny Photoshop fantatsika, fa ilay Photoshop "tena izy" namboarina tamin'ny iPad.
Tsy nieritreritra ny handefa ilay rindranasa miaraka amin'ireo asany rehetra ao anaty manontolo i Adobe. Ny azo antoka dia nahemotra kely ny fandefasana azy. Nampiany koa fa rehefa vita izany dia mbola hiasa mafy izy ireo hanisy asa vaovao, araka ny fandaharam-potoana "mahery setra" napetrak'izy ireo amin'ny tenany.
Sary Affinity. Alternative tsara ho an'ny Photoshop.
Ny tolo-kevitro manokana dia raha manana iPad Pro ianao ary tsy te hiandry ny Photoshop hanomboka, manana safidy tsara hafa ianao Affinity Photo. Miaraka amin'ny fividianana indray mandeha vidin'ny € 21,99, tsy misy drafitra isan-taona toa an'i Adobe. Niara-niasa taminy nandritra ny volana maro aho ho an'ny iPad Pro sy ny endriny amin'ny birao ary tsy misy zavatra tokony hitsiriritana an'i Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Photoshop ho an'ny iPad dia havaozina araka ny fandaharam-potoana mahery setra avy amin'ny Adobe
Prototype Geskin tsy misy notch ary miaraka amin'ny Antenna ho an'ny 5G
Podcast 11x09: Ary Keynote ho an'ny rahoviana